नदी हाम्रा प्राण धमनी- विविधा - कान्तिपुर समाचार
नदी हाम्रा प्राण धमनी
काठमाडौंमा प्याकप्याक परेको नदीको आात सुक्दै गर्दा हाम्रो सभ्यता पनि त सुकिरहेको छ । नदी नसुसाएको सहरको आधा प्राण त त्यसै मरेको हुन्छ ।
वैशाख ६, २०७७ सरला गौतम
काठमाडौँ — मलाई नदीको आवाजले एक खालको नशा दिन्छ । नदीकै आवाज सुन्न र नीलो आकाशमुनि पल्टन भए पनि म बेलाबेला काठमाडौं छोड्ने गर्छु ।
केही महिनाअघि म, अरुण उपत्यकाको सम्झनाले मात्रै पनि सम्मोहित थिएँ । शरद ऋतु सकिँदै गरेको भए पनि मौसमको जादू बाँकी थियो । अरुण उपत्यका सेरोफेरो मार्दै छु भन्ने कल्पना मात्रले पनि पाइताला भुइँमा थिएन ।
झोला बोकेर फुत्त चलिहालें । अन्तत, अरुण नदीको दर्शन पाएँ । यही नदीको सेरोफेरो नियाल्दै किमाथांका पुगें । पाँच दिनको बसाइमा किमाथांका गाउँबाट पर अरुण नदी सुसाएको सुनिरहें । सिरानीमा टाउको राखेर सुत्दा नदीले गीत गाइरहेको सुन्नु त स्वर्गकी परीले गाएजस्तो लाग्छ । नदीको सेरोफेरोमा यात्रा गर्दै छु भने सारा कष्ट भुलाउने माधुर्य राग यही हो । पहिलो दिन वरुण उपत्यकामा बास परेको थियो । भिडियो हेरेर कल्पेको ठाउँमा मेरो ज्यान हाजिर थियो । बिहानको हल्काहल्का बतास छिचोलेर नदीतिर गँए । बासभन्दा सय मिटर पर हुँदो हो । बालुवामा पाइला परेपछि पाइताला आफैं नाचें ।
किमाथांकामा साँझमा हातमा चिया गिलास लिएर नदीतिर हेरिरहन्थें । नदी हेरेर कल्पनामा डुब्नुको निजी सुख बाँचिरहेकी थिएँ । नदीमा गाडिएका बडेबडे डोजरका कर्कश आवाज नदीको त्यो कोमल गीतलाई चिथोरिरहेका हुन्थे । यो लेख्दै गर्दा कोरोना त्रासदीको बीचमा पढेको अजय दीक्षितको लेख ‘म गंगा पृथ्वीको धमनी’ का हरफहरू सम्झन्छु । ‘तपाईंहरूमध्ये कोही राज्यले सकेन भन्दै एकांकी बजारको शरणमा पुगी नदी र जलनिधिको पूर्ण निजीकरणको वकालत गर्नुहुन्छ ।
केही जलसेवा आपूर्तिमा बजार संलग्न छ, तर बजारको नियमन गर्नुहुन्न । हामी नदी तपाईंहरूको सिर्जना होइनौं । हावा, पानी र माटो निर्माण गर्ने क्षमता तपाईंहरूमा छैन भन्ने हेक्का अझै पलाएको छैन ।’ नदीको आत्माको आवाज उनको लेखमा छ । संसारभरिका विकासविद्हरूमा नपलाएको चेत यही त हो, कि उनीहरू हावा, पानी, नदी र माटो बनाउन सक्दैनन् । मानिसले जस्तै ठूलो कारखाना बनाउन सके पनि यी चीजहरू केवल प्रकृतिको स्वामित्वमा छन् ।
उता किमाथांकामा हाम्रा मानिसहरू वारिबाट पारि हेरेर चीनले के–के विकास गरिसक्यो भन्थे । डोजरले बालुवा निकालेर बनाएका यामानका ‘बिल्डिङ’ देखाउँथे । म भने रमाउनै सक्दिनथें ।
सहरमा बसेर सारा सुविधा भोगेको मैले, उनीहरूको अघि प्रकृतिको गुण गाउनु शोभनीय लाग्दैनथ्यो । मनमनै भन्थे, त्यो पारिको जस्तो कंक्रिटको जंगल बनाउने विकासले हाम्रो भोटखोलालाई छुनै नसकोस् । मानिसहरूका लागि, बाटो बनोस्, अस्पताल बनोस्, तर हावा र पानीका लागि तड्पिनुपर्ने विकासले छुँदै नछोओस् । अरुण नदीको दोहन गरिराखेको चीन सरकारसँग मलाई खुबै रिस उठ्थ्यो । स्थानीयहरूसँग उभिएर भन्थें, ‘त्यो पारिको देशले कति नदी कोपरेको ?’ उनीहरू आफ्नो स्वरमा झोंक भरेर भन्थे, ‘कतिपटक त्यो डोजर हाम्रो नेपालको भागतिर आउँछ । यस्तो बेला हामी पूरै गाउँ उठेर ढुंगा हान्न जान्छ ।’ देशभित्रै परदेशी भएर बसेका उनीहरूको देशप्रतिको मायाले मेरो आँत रसाउँथ्यो । कुनै बेला म फेरि फर्केर आउँला यो ठाउँमा । अर्कोपटक आउँदा वाग्मतीको जस्तो हाल अरुणको देख्न नपरोस् । सिरानीमा लोलाएका आँखा लिएर नदीको गीत सधैं सुन्न पाइयोस् । मैले त यति मात्र कल्पना गर्न सक्थें ।
नदीको आडमा सभ्यता फस्टाएको हुन्छ । मानवले पानीको मुहान खोज्दै बस्ती बसाउँछ । पहाडतिर हिँड्दा ‘त्यस्तो डाँडामा मानिस किन बसेका’ भनी स्थानीयलाई सोध्थें म । उनीहरू जवाफ दिन्थे, त्यहाँ पानीको मूल राम्रो थियो त्यसैले । समथरमा नदीको आडमा, पहाडमा मूलको छेउमा मानिसहरूले आफ्नो सभ्यता र संस्कृतिको उन्नति खोज्छन् । काठमाडौंमा प्याकप्याक परेको नदीको आँत सुक्दै गर्दा हाम्रो सभ्यता पनि त सुकिरहेको छ । नदी नसुसाएको सहरको आधा प्राण त त्यसै मरेको हुन्छ ।
बेजान, रूखासुखा ।
नारायणी नदीको सूर्योदय, सूर्यास्त हेरी हुर्केको म, काठमाडौंमा नदीको सुसेली खोजिबस्छु । भेट्दिनँ र भौंतारिंदै नदीको गीत खोज्न निस्कन्छु । केही वर्षअघि दार्चुलामा पुगेर, अरू केही नगरी महाकाली नदीलाई दुई दिनसम्म नियालें । पहिलो दिन, अथाह यात्राको थकाइको कारण कानले आवाज मात्र सुनें कोठामै पल्टेर । भोलिपल्ट आफू बसेको छतमा गएर नदीलाई एकतमासले हेरेर दिन बिताएँ । झलमल्ल सहरमा सबैथोक त देख्न सुन्न पाउँछु नदीको गीत कहाँ पाउँला ? यस्तै लागिरह्यो
त्यो बेला । अहिले हामी कठिन समयसँग जुध्दै छौं । घरमै थुनिएर त्यो नदीको जिल्लाका मानिस पारि धार्चुलामा विपत्मा परेको समाचार पढ्छु । देशतिर चियाएर बसिरहेछन् हाम्रा मानिसहरू ।
नदीकै छेउ उनीहरूको प्यास मेटिएको छैन । मनलाई विरहको एक झोक्काले हानेर जान्छ यस्तो पढ्नु देख्नुपर्दा । थोरै मानिसको हित सर्वोपरि मानेर गरिएको कु–विकासको परिणाम हो यो सबै ।
काकाकुल विकासले श्रमिकको मान र माया गर्न जान्दैन । आत्मनिर्भर विकास भएको भए, आफ्नै पाखोमा कृषि फस्टाएको भए उनीहरू किन जान्थे होलान् परदेश । आफनै घरआँगनको न्यास्रो मनभरि बोकेर । अजय दीक्षित नदीको आत्मकथा शैलीमा लेखिएको आफ्नो लेखमा लेख्छन् ‘पोखरी कुण्ड, तालतलैया र सिमसारमा बुल्डोजर दगुराउनुहुन्छ, मास्नुहुन्छ चौरहरू देख्यो कि कंक्रिटले ढाकिहाल्नु हुन्छ । भू–जल भरिन पाउँदैन, जलचक्र खण्डित हुन्छ, हामी नदीहरू ह्रास हुन्छौं भन्ने सोच्नुहुन्न, न त विपन्नहरू अन्यायमा पर्छन भन्ने वास्तविकता ।’
नदी कोपर्नेहरूको ज्यादती अलग छ । चितवन जाँदा त्रिशूलीतिर नजर फाल्दै जान्छु । ठाउँठाउँमा नदी चिथोरिरहेका साँइदुवाहरू देखिन्छन् । उनीहरूलाई बसको भ्यालबाट चिच्याएर ‘बन्द गर यो सब’ भन्न मन लाग्छ । आफ्नो निजी वृत्ति विकास मात्र सोचिहिँड्नेले आफ्ना सन्तानका लागि कस्तो भविष्य छोडेर जाने हो कति नसोचेको ? कति चाहिएको पैसा, किन चाहिएको यति पैसा ? नदी जति सप्पै सुकाएर बोतलको पानी किनेर खानलाई ? पानीका कलकल आवाजमा सहर, गाउँको सौन्दर्य खुलेर आउँछ । यसमै यो सुन्दर जीवनको प्राण भरिएर आउँछ । यिनीहरूले कति नबुझेका । कति खेदो खनेका पानीका मुहानहरूको । दीक्षितकै भाषामा ‘प्रकृतिसँग प्रेमसहित बातचित गर्ने सच्चा मानव आत्माहरूले सुरु गरेका जल संरक्षणसम्बन्धी केही स्थानीय सत्प्रयास छन् तर यतिले हाम्रो खस्कँदा यात्रा रोकिएको छैन । हामी बग्ने बाटाहरूलाई जानीजानी हडपेर साँघुरो पार्नुभएको छ ।’ पछिल्लोपटक दसैंको बेला जनकपुर जाँदा पोखरीहरूमा चमक देखें । मेरो मनले मयूरी नाच नाच्यो ।
मग्न मग्न भएर निकै बेर गंगासागरमा मन डुबाएर बसें । जनकपुरका पोखरीहरूमा फर्किएको सौन्दर्य देखेर म मखलेल थिएँ । थाहा छैन किन हो यो सहरसँग एक खालको लगाव छ मेरो । पाँचौंपटक पुगेकी थिएँ म । दसैंको बेला पोखरीवरिपरिको झंकार, उज्यालो र चमक मनै हर्ने थियो । जनकपुरको चिनारी पोखरीहरू हुन् । पोखरीहरू बेजान र फोहोरी भए बाँकी चिनारी पनि फिका हुन्छ ।
हाम्रा हरेका ठाउँमा कुनै न कुनै नदीले त्यो ठाउँको चिनारी बोकेको हुन्छ । जस्तो म हुर्केको ठाउँको चिनारी नारायणी नदी हो । सानो छँदाको कुरा सम्झन्छु । भृकुटी कागज कारखानाको फोहोर नदीमा मिल्काइन्थ्यो । कारखानाबाट निस्केको कालो धूलो मानिसको घरघरमा आउँथ्यो । हाम्रो आमाहरूको एक समूह जुर्मुरायो । सेता कपडाहरूलाई मुर्दाको रूप दिए । काँधमा बोकेर शंख बजाउँदै नदीतिर गए । कारखानाले फोहोर गरेको ठाउँमा धर्ना पनि दिए । त्यो सेतो कपडामा कति कालो धूलो थुप्रियो कारखानाका मालिकलाई देखाउन गए । कुनै ठूलो वातावरणविद्हरूले चालेको अभियान थिएन त्यो । आम मानिसहरूको चेतनाले डोर्‍याएको निकै महत्त्वपूर्ण पाइला थियो । नदीको आकार खुम्चँदै गएको थियो । नदी फोहोर हुँदै थियो । कारखानाको प्रदूषणले आफ्ना खेतीबारी र श्वासप्रश्वासमा पारेको असरमा सचेत थिए । उनीहरूले आफ्नै तरिकाले पिरलो पोखेका थिए । हरेकपटक नारायणगढ जाँदा नदीको रूप हेर्छु । पहिलाभन्दा खुम्चिएको हो कि भनेर मन दुखाउँछु । योपटक वर्षायाममा घर जाँदा आफ्ना बहिनीहरू र केटाकेटीहरूसँग घण्टौं नदी किनारमा बिताएको सम्झना मलाई प्रिय छ । यसो सोच्छु मेरो सहरबाट नदी हराएको दिन के हुन्छ होला ।
संसारभरिका सहरमा अहिले सन्नाटा छ । मानिसहरू आत्तिएका छन् । चराहरू भने ठूलो स्वरमा चिरबिर्चिरबिर् गरिरहेछन् । उनीहरू आफ्नै साविकको आवाजमा गाइरहेका होलान् । मानिसको अहंकारको स्वर सानो भएकाले उनीहरूको स्वर ठूलो सुनिएको होला । हामी मान्छे प्राकृतिक स्वर मात्र कँहा बोल्छौं र त्यसमा अलिकति सर्वश्रेष्ठ प्राणी हुनुको अहंकार र महत्त्वाकांक्षाको बिष पनि मिसाएर बोल्छौं होला नि । यो घना शान्तिमा पनि कति बेलै वाग्मतीको स्वर सुनिदैन । चराहरूको गीत त फर्किएको छ, नदीको संगीत सहरबाट हराएको धेरै भयो । सहरमा वाग्मती दुखेको छ । नदीको सुस्केरा पनि हराएको छ । उनले मलाई दुख्यो भन्न पनि नसक्ने गरेर उनको स्वर हराएको छ । नदीको गीत लोप भएको सहरमा हामी हाम्रो अर्थ र अस्तित्व कहाँ खोज्छौं होला ।
वैशाखको चर्को घाममा कर्णाली किनार हिँडेको सम्झन्छु । चर्को घाममा थाकेपछि भीरमा चेपिएर कर्णालीतिर हेरिरहन्थे । कहीँ उर्लेको, कहीँ शान्त बगेको । मेरो सुस्केरा त्यही नदीको गहिराइमा मिसाउँथें । कसैलाई परवाह नगरी बगिरहेको कर्णाली मलाई सानदार लाग्यो । उनको भिडियो खिचिरहें । मलाई एक दिन नदी हराएको सहरमा फर्केर जानु छ । न्यास्रो लागेको बेला त्यही भिडियो खोलेर हेर्नुपर्नेछ । यसैले धीत मरुन्जेल खिचिरहन्थें ।
मुगु कटेर बाजुराको कोल्टितिर हाँनिदै थिएँ म । हुरी–बतास, चर्को घाम, वरिपरिका नांगा र उराठ अजंगका डाँडाहरू ।
विरहको सीमा थिएन । विरह मानी सुस्ताउने अवस्था थिएन । बोकेका झोलासँगै कर्णालीमा पसूँ कि जस्तो भाव पनि आयो । शरीरले सास्ती थेग्नै नसकेको बेला यस्तो हुँदो रहेछ । उभिएर नदीतिर हेरें । कर्णालीले भनेझैं लाग्यो ‘हेर त म कति दिक्दारी आफैंभित्र खाँदेर चुपचाप बगिरहेछु । बग्नु भनेको दिक्दारी सकिनु होइन, सबै सकस आफैँभित्र समेटेर निरन्तर गतिशील हुनु हो ।’
गहिरो कर्णालीले गहिरै दर्शन दिइनँजस्तो लाग्यो । नदी जति चुपचाप बग्छ उति गहिरो हुन्छ भन्छन् । मानिस जति चुपचाप हुन्छ उति बुद्धिमान भन्छन् । फेरि सोचें गड्गड् गर्ने खहरे र ढुंगा माथिमाथि उर्लेर हल्ला गर्दै बग्ने खोलाको पनि त सौन्दर्य छ । नदीसँगको वार्तालापमा दार्शनिक पारा निकाल्थें । नदीले भनेझैं लाग्थ्यो ‘जाऊ बिस्तारै जाऊ ।’ घाँटीमा आवाज रोकिएको बखत पनि कर्णालीले साहस दिइरहिन् ।
डाँडाडाँडामा भुलभुल गरी फुट्ने मूलहरू सुक्दै छन् । भुलभुल गरी फुटेका मूलहरूले पूरै गाउँका मानिसको प्यास मेटिदिन्छन् । आफ्नै प्राणदाताको रक्षा नगर्ने हामी मानिसहरूलाई उनीहरूले के भन्थे होलान् बोल्न सक्ने भए । बोली त हुन्छ नि तर हामीले सुने पो । पानीको मूल नभएको गाउँ, नदीको गीत नभएको सहर, खण्डहरमा महलको सपना देखिबस्ने हामी पटमूर्खहरू ।
नदीमाथिको ज्यादती जोगाउन लागिपरेका मानिसहरू आफैं मारिएका खबरहरू हामी आइफोन र स्मार्टफोनमा पढेर बस्छौं.। बिना कुनै संवेदनशीलता अर्का खबरका लागि स्क्रिनमा औंला नचाउँछौं । हाम्रा अभिमानहरूसँग प्रकृति क्रोधित भएकी होइनन् । उनीजस्तो विशाल र उदार चरित्रलाई हामी नाथे मनुवासँग रिसाउनै पर्दैन । उनले थेग्नै सकेकी छैनन् हाम्रो ज्यादती । आफ्नै प्राण धमनीहरूलाई हामीले गरेको हमलासँग त्रसित भएकी हुन् । क्रन्दन गरिरहेकी छन् यो बखत प्रकृति माता । कम्प्युटरले फाइल थेग्न नसकेपछि ह्याङ हुन्छ । पृथ्वी ह्याङ भएको बेला छ । हामीले चुप लाग्नुको अर्को विकल्प छैन । पृथ्वीको ‘फरम्याटिङ’ का लागि प्रकृतिको सेवा नै एक मात्र उपाय हो ।
धर्ती हामीबिना पनि रहन्छिन् । सारा उतारचढाव सहन्छिन् । धर्तीको धमनी नदीहरू नै सुकेपछि हामीले आफ्नो जीवन खोज्ने ठाउँ बाँकी नरहला । संसारका केही प्रभुत्वशाली मानिसहरूले आफ्नो सुख–सुविधाका लागि प्रकृतिको अथाह दोहन गरे । आफ्ना बेकुब कामहरूमा आफूभन्दा कमजोर मानिसहरूलाई जोते । बर्बादीको समयमा पनि सबैभन्दा मार कमजोरलाई नै पर्छ । यतिखेर भने मै हुँ भन्ने मानिसका पनि सारा ध्वाँसहरू बन्दकोठामा थुनिएका छन् । जब निस्कन्छौं सोच्नैपर्ने हुन्छ, कोठामा पोस्टरमा नदीनाला हेरेर बस्ने, प्लास्टिकका फूलबिरुवाले घर सजाएर बस्ने, कीटनाशक भरिएका तरकारी खाएर देश दुनियाँका गफ मात्र गरिबस्ने कि प्रकृतिमा फर्कने । वातावरणविद् बन्दना शिवा भन्छिन्, ‘पृथ्वीलाई आफ्नो अस्तित्व कसरी जोगाउने भन्ने थाहा छ । उनले आफ्नो तरिका पत्ता लगाउँछिन् । अनेकौं उथलपुथल उनका लागि सामान्य हो । हामी मानिसहरूले नै सोच्नुपर्छ आफ्नो पृथ्वीरूपी घरको कसरी रक्षा गर्ने भनेर ।’
त्यसैले अब हामीलाई प्रकृतिसँग कसरी मिसिएर बाँच्ने भन्ने ज्ञान चाहिन्छ । बन्दना शिवाकै भाषामा, ‘आइमाईहरूको ज्ञान’ चाहिन्छ । प्रकृति जोगाउने, बीउको रक्षा गर्ने, खाना बनाउने र खेती गर्ने ज्ञानहरू । जसलाई ‘इमोसनल इन्टिेलिजेन्स’ भनेर हेला गरियो अब त्यही चाहिएको छ । एकअर्काको परवाह गर्ने नीति, योजना र विकास चाहिएको छ । हामीले साना–होचा भनेर नगनेका कामहरू गर्नु छ । घरघरमा हेंला गरिएका खाली ठाउँहरूमा हरियाली फर्काउनु छ । गाउँबस्तीका बीचबीचमा पानीका मूलहरू जोगाउनु छ । नदीहरूको आत्माले भनेजस्तै नदीहरू जोगाउन, प्रकृति बचाउन साँच्चैको यज्ञ नै चाहिएको छ । अनि हाम्रो जीवन साँच्चिकै ब्युँतिएला । हर सुख–दुःख बितेर जानकै लागि हुन् । यो समय बितेर जानेछ । यो सुन्दर पृथ्वीमा हामीसँग एक सुन्दर जीवन हुनेछ । नयाँ यात्राका लागि यही नै काफी हुनेछ ।
प्रकाशित : वैशाख ६, २०७७ ०९:२७
‘सुनाइदेऊ हाम्रा चौरी मरेका कुरा’
चैत्र १, २०७६ सरला गौतम
काठमाडौँ — भुइँचालोका बेला जाजरकोट, रुकुम हुँदै डोल्पा पुगेकी थिएँ । १५ दिन गाउँ–गाउँ डुल्दै हिँडें । गाउँलेका घरमा, कहिले मन्दिरमा, कहिले ब्यारेकमा बास पर्‍यो । दुनै बजार पुगें । सामुन्ने घरमा थिए– थिन्ले दाइ ।
तन्नेरी भएका भए ‘झ्यालबाट हेरेको तिमीलाई’ भन्दै गीत गाउँदा हुन् कि ! भेटको सुरुमा त उनले मलाई खासै बाल दिएनन् । काठमाडौंमा घरमा लगेर चियर्स गर्दै, क्याराभान हेर्दै अन्तर्वार्ता लिएको सम्झाउँदा पनि उनले गनेनन् ।
म फोक्सुन्डो पुगेर फिरेपछि भने ट्वाल्ल हेरे । हामी पाँच दिनका लागि छिमेकी थियौं । बजारको बीचमा बसेर बात मार्‍यौं । गिलिल्ल हाँस्यौं । गर्दियौं तमासा । अनि उनले भने, ‘तिमी अझै माथि जानुपर्ने । चौंरीको बिजोक हेर्नुपर्ने !’ एक छिनमा रिस र जोस मिलााएर भने, ‘पहिलो नम्बरमा प्रचण्डा, दोस्रो बाबुराम, तेस्रो सुशील कोइराला, चौथो शेरबहादुर अनि रामचन्द्रालाई गएर भन्देऊ, हाम्रो चौरी मरेको कुरा । डोल्पामा बाटो नआएको कुरा ।’ थिन्लेलाई मैले भनिनँ– सिंहदरबारमा खबर टिप्न जाने हूलमा मिसिन मन लाग्दैन थिन्ले दाजु ! भीर–पाखामा नेता भेटिँदैनन् । बाटो बाटो भन्दा–भन्दै बाटोमै लडेर परलोक भए थिन्ले दाइ । जीवन भन्नु फगत एक
सम्झना ! आफ्नो जिल्लाका लागि उनले देखाएको चासो भने मनमा खील बनेर रोपिएको थियो ।
केही दिनअघि बाबुराम भट्टराईसँग एउटा पुस्तकको विमोचनमा भेट भयो । उनीसँगको मतभेद र दुखेको हृदयलाई एकै छिन छेउ लाएँ । थिन्ले दाइको कुरा सुनाइदिएँ । अरू कति थिन्ले र डोल्माका कुरा त मनबाट निस्केर पहरामा ठोकिँक्दो हो, उनीहरूतिरै फर्कंदो हो । लेखक गंगा श्रेष्ठको ‘मध्य(पहाड यात्रा’ पुस्तकको पानाहरू पल्टाउन थालें । हरेक पानामा बोध भयो– लेखन र राजनीतिका लागि यात्रा प्राण–वायु हो । बोधो भएको लेखक र राजनीतज्ञ जब ‘आम’ भनिने मानिसको आँगनमा पुग्छ, अनि ‘खास’ भएर फर्कन्छ । संसारभरिका विद्वान्को नाम कण्ठ पारी बसेको लेखक आफ्ना ठाउँ र मानिसका मनको बात नजानेर रनभुल्ल हुन्छ । जब गाउँ पुग्छ, गाउँलेले भरिदिन्छन्– स्वादिला लोक ज्ञान, दर्शन र विम्बहरूले । भुत्ते भएको ज्ञानको खुकुरीमा दाउ लाएर फर्कन्छ । आफ्नो माटोमा उब्जेको ज्ञानको स्वादभन्दा मीठो के हुन्छ यो लोकमा !
पुस्तकको सुरुमै लेखकले अब जनतालाई सुन्न जाने पालो भनेका छन् । सुनाउन मात्र हिँडेका, सुन्न नमान्नेलाई कारबाही गरेका पार्टीका मानिसको यतिको बोध नै स्वागतयोग्य लाग्यो । सापटी दर्शनको बोझ बिसाएर मौलिक दर्शन बोकेर फर्केलान् भनी पाठक मन आशावादी बन्छ । नागरिकलाई सुन्न जाने कामलाई ‘महान् कार्य’ भनेको चित्त बुझ्दैन । यो त आधारभूत कुरा हो । आफ्ना मानिसलाई नसुनेकै कारण खिया लागेका छन् हाम्रा मगन्ते दर्शनहरूमा ।
पूर्वप्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईसहितको टोली खोटाङको जनजागृति विद्यालय पुग्छ । परम्परागत शिक्षा प्रणालिलाई नगनेर आफ्नै व्यावहारिक शिक्षा प्रणालिमा रमाएको विद्यालय । बारीमा काम गरिरहेका, सुंगुरलाई चारो हालिरहेका, भवन निर्माण गरिरहेका, विद्यार्थीहरू मस्त छन् । नबोली भनिरहेछन् लेखकको टोलीलाई, ‘हेर यस्तो हुन्छ वैज्ञानिक शिक्षा प्रणाली । भाषण र नारा छोड, कर्म गर मानिस कर्म ।’ यस्तो व्यावहारिक वैज्ञानिक शिक्षा सबैतिर फैलिए ! म आफैं कल्पन्छु ।
लेखक टोली धनकुटा नगरपालिका–६ सल्लेरी वनको स्यानिटरी ल्यान्ड फिल्डमा पुग्छ । फोहरको थुप्रोमाथि बगैंचा देख्छ । वातावरणीय चेत घुसेको छैन हाम्रो राजनीतिमा । विकास भन्नु केवल भौतिक संरचना भन्ने बुझेको राजनीतिक दर्शनले हामीलाई कहाँ पुर्‍याउला सम्झेर कहालीलाग्दो छ । यस्ता बगैंचाले भने होलान् कि जाऊ टोली, अरू धेरै ठाउँमा यस्तै हाम्रा साथी बगैंचाहरू बनाऊ । विकास बाँच्न पनि त मानिसले सास फेर्नैपर्छ नि !
एकमहिने यात्रामा लेखक र टोलीले कतै कृषि रोड घुमेको देखे । कतै मूल मार्ग नै बटारिएको देखे । स्थानीय नेताज्यूहरूको दैलोमा जानुपर्‍यो सबै कुरा । जनताले सहने सास्ती र ढिलासुस्ती त दाल–भातजस्तै सामान्य भयो । स्थानीय बदमासीमा नजर नपुर्‍याई केन्द्रीय बदमासीको लेखाजोखा अपुरो हुनेछ । मेरो सम्झनामा दुई कुरा आए, एक भर्खरै पुगेर फर्केको किमाथांका जोड्ने कोसी ल्हासा राजमार्गको ढिलासुस्ती, अर्को भुइँचालोको बेला डोल्पा पुग्दा भेरी नदीमा पल्टिरहेको युवकको मृत शरीर ।
भेरी नदी किनारको होटलमा मानिसहरू साउती गरिरहेथे, ‘जीविसमा भ्रष्टाचारको कुरा उठाउने केटोलाई त मारेछन् । लास किनारमै छ रे !’ मन चिसो भएथ्यो मेरो । नदीतिरबाट बहँदै आएको बतासले रिस भरेर आफ्नै गालामा थप्पड हानेझैं लागेको थियो । नजाने कति कुरा यसरी हावामा आउँछन् र जान्छन् । हिसाब राख्ने फुर्सद यहाँ कसलाई ? भ्रष्टाचारको रकमलाई सुपाडी भन्थे थिन्ले दाइले । सुपाडीको चाँगै लागेका दृष्टान्तको खोजी अपुरो छ । गंगा श्रेष्ठले ‘मध्य(पहाड यात्रा’ पुस्तकमा इन्द्रसरोबर नदीको बिजोग बताएका छन् । नदी कोपरेर नअघाएका दुष्टहरूको प्रसंगले आँत पोल्छ ।
केही समयअघि नदी दोहन जोगाउन धनुषाका दिलीपकुमार महतो लागिपरे । बदलामा माफियाहरूले ज्यान लिएको समाचार आयो । यो केस कहाँ पुग्यो, अहिले समाचारमा ओझेल परेको छ । दिलीपको केस त केही हदसम्म भए पनि चर्चामा आयो । भेरी नदीमा एक्लो पल्टिरहेको त्यो युवकको मृत शरीरले के भन्दो हो हामी पत्रकार र नेतालाई ! देशैभरि कति मानिस होलान्, जो बेखबर एक्लै लडिरहेका होलान् ।
लेखकले रुकुमको चौराजहारीमा सिँचाइ र पुलको प्रसंग निकालेका छन् । एउटै पुलमा बीस वर्षदेखि राजनीति घुमिरहेको छ । ‘धारा बन्ला भनेर बालुवा बोक्दाबोक्दा तालु खुइलियो । पानी आएन,’ धादिङको ताल्ती गाउँका एक प्रौढ सम्झन्छु । दलीय गन्जागोलमा अल्लेको विकास गाँठो कसिलो छ । केन्द्रले बेवास्ता गर्‍यो भन्ने एकोहोरो रटानले मात्र पुग्दैन । स्थानीय बदमासीलाई सफा पार्न, त्यसको खोजीनिदी आवश्यक छ । यसैका लागि ‘हाम्रो गाउँमा पत्रकार आउँदैन । हाम्रो गाउँमा नेताले पाइला राख्न भ्याउँदेन,’ यो नयाँ उखान बदलिने बेला भएको छ ।
अक्सर लामो–लामो पदयात्रा गरेको हुनाले म पुस्तकमा पदयात्राको स्वाद खोज्दिरहेछु । लोपोन्मुख भएको छ हाम्रो पदयात्रा । योसँगै, लोकसंगीत, संस्कृति, खाना, रिवाज र परम्परा मात्र हराउँदै छैन । हराइरहेको हाम्रो लोकदर्शनको माया लागेर आउँछ । लोक दर्शन मिसिएका नीति भए कति जाती हुन्थ्यो । कति बाटाहरू हामीलाई एक्लै पर्खिरहेका होलान् ।
जब आउँछ पानाहरूमा, सिन्धुलीको जुनार, धनकुटाको काउली, कागते बजारको कागती, लसुने बजारको लसुनको कथा, हैसियतको बोक्रा फालेर लेखकको टोली लसुन पोको पार्न दगुर्छन् । रमाइलो लाग्छ, बचपना । बालक हृदय फेरि जागे मात्रै नयाँ कुरा लेख्न सकिएला । ठाउँठाउँमा किसानका कुरा सुन्ने मेसो पनि जुराउँछन् । समस्याका गाथा सुन्दा आत्तिएका छन् मानिसहरू । समाचार हेर्‍यो कि अपराध कि भ्रष्टाचार । नेताको कुरा सुन्यो अर्कोलाई गाली मात्र छ । छैन, छैन, हुँदैन, हुँदैनको आतंकले वायुमण्डलग्रस्त छ । ठाउँ–ठाउँका कृषि सम्भावना र तिनले ल्याउन सक्ने व्यावसायिक उन्नतिमा काम हुन्छ कि भन्ने आस पलाउँछ । एअरपोर्टको लामो लाइन छोटिँदै जाला कि, चम्किएको बाकसमा अस्ताएका सपना फर्कने दिनहरू सकिएलान् कि !
मानिसहरूलाई आफ्नो देश परदेश भएको छ, परदेश देश । ‘नेपालको कमाइले चिया खान्छौं भारतको कमाइले जीवन धान्छौं’ भन्थे सुदूरपश्चिमका नागरिक । लेखकले भेटेका चिवाभञ्ज्याङका एक नागरिकले गाउँको खबरसँग बेखबर भएको बताउँछन् । उनको काम काठमाडौंमा धेरै पर्छ । विकेन्द्रीकरण कागजमा मात्र भएको छ । सिंहदरबार गाउँगाउँमा भनेको, सिंहको पुच्छर पनि पुगेको छैन भन्छन् अचेल ठाउँठाउँमा । गाउँ परपर काठमाडौं वरवर छ देशको धेरै भागमा । यो दैनिकी नागरिकको काँधमा कति बोझ हुन्छ होला, बोध गर्न सकिन्छ ।
च्यांगथापुका नागरिकले लेखकको टोलीसँग आफ्नो सास्ती बिसाउँछन् । सीमाको बाटो जोडिए हुन्थ्यो भन्छन् । सिक्किम, बंगाल र नेपालको सिमाना फालोट जम्मा सत्र किलोमिटर पर छ । यो बाटो खुले नेपालीले लाभ लिन सक्छन् । केही महिनाअघि पुगेको किमाथांका सम्झन्छु । चाइनाको सीमासम्म बाटो पुगे के–के मात्र गरौंला भनेर पर्खेका मानिसहरूको उत्साहको झल्को आउँछ ।
टोली झुलाघाट नाकामा गएर नागरिकका पीर–मर्का र व्यावसायीक अप्ठेरोका कुरा सुन्छन् ।
बाबुराम भट्टराईले ‘संसद्मा कुरा उठाउँछु’ भनेको जिम्मेवार प्रतीत हुन्छ । दुई देशको बराबरी सम्बन्धको कुरा काठमाडौंमा गर्न सजिलो छ, नाकामा एक छिन उभिन हामीलाई हम्मे छ । सिमानाको प्रसंगले म वनबासा नाका पुग्छु सम्झनामा । पचास रुपैयाँको गुँड (सख्खर) किन्दा पैसा जोगाई–जोगाई किन्छन् नेपालीहरू । ठाउँठाउँमा अपमानित हुँदै लुटिन्छन् एकै छिनमा । राज्यका नम्बर नम्बरका जिम्मेवार अंगहरू त्यहाँ उभिनुपर्ने होइन र ?
‘जनयुद्धका’ दिन सम्झेर लेखक भावुक पनि हुन्छन् । २०६० सालमा तेह्रथुमको संक्रान्तीमा कुकर बम पड्केको प्रसंग छ । पूरै घर ध्वस्त भएको र एक किशोरीको ज्यान गएको हुन्छ । ‘युद्ध कति निर्मम हुन्छ । सानासाना असावधानीले कत्रा विपत्तिहरू लिएर आउँछन्,’ विरक्त भएर युद्ध सम्झेपछि अर्को प्रसंगमा उनीहरूकै युद्धको कारण सबै बद्लिएको भन्छन् । राजीखुसीले युद्धमा हिँडेकालाई त कहाली थियो ।
जबरजस्ती घिसारिँदै मारिएकालाई त्यो ‘जनयुद्ध’ के थियो ? लेखक र उनका नेता बाबुरामले कुनै दिन आत्मालोचना गर्ने नै छन् । जनयुद्धको सेल्टर मानिएको लुकुम गाउँ पुग्छन् लेखकको टोली । बेनी फौजी कारबाहीको तयारी गरिएको ठाउँ हो यो । लेखकले बेनीको एक ठाउँमा गोलीले छेडिएको पोलमा उभिएर तस्बिर खिच्छन् । मेरो मन गहिरो पीडामा जान्छ । एक छिन मन मस्तिष्क हल्लन्छ । बल गरेर निस्कन्छु यो दृश्यबाट । कति निर्दोषको छाती छेडेर गए ती गोलीले । लेखकलाई जस्तो मलाई गर्व लाग्दैन ।
न्यायिक निरुपणको सवालमा उनले यो राजनीतिक निर्णयबाट टुंगो लाउनुपर्छ भनेका छन् । यसो भन्न मिल्ला ? पीडितहरूले
आफ्नो घाउ बिर्सन नसकेर बोलिरहेछन् । सरकार र बिपक्षी दुबै मिलेर एकपक्षीय निर्णय थोपर्न मिल्दैन । मंगलसेन दरबारको ऐतिहासिक र पर्यटकीय महत्त्व सम्झाउँछन् अर्को पानामा । यो ध्वस्त भएको दरबार पुनर्निर्माण गर्न सरकारलाई दबाब दिने कुरा गर्छन । कस्तो नमिलेको । ध्वंस आफूले गर्ने पानीमाथिको ओभानो भएर अरूलाई उपदेश दिने । लेखकसँग विमतिमा उभिन्छ मन ।
संकीर्ण राजनीतिक चेतसँग लेखक पनि थाकेको देखिन्छ । ठाउँठाउँमा, मारिएका आफ्ना कार्यकर्ता र सेनाप्रति बराबरी संवेदनशील भएका छन् । यो भने सकारात्मक कुरा हो । सिन्धुलीमा पुग्दा, आठ सालमा दिल्ली सम्झौताको विरोध गर्दा मारिएका नेपाली कांग्रेसका बाबुराम बरालको सालिक देखर प्रसन्न भएका छन् । कांग्रेस, एमाले र माओबादीले सहिदप्रति देखाएको साँघुरो भावनाप्रति दुःखी भएका छन् । यही साँघुरो स्कुलिङकै कारण नेपाली राजनीतिमा वैचारिक विविधता नअटाएको कुरामा लेखक खुल्दै गएका छन् ।
देशका हितका लागि ज्यान दिने सबै विचारका सहिदप्रति उनले देखाएको सम्मान मन छुनेछ । ‘जनयुद्धको’ गढ रुकुमको लुकुम गाउँ बदलिन नसकेकोमा मन दुखाएका पनि छन् । बाबुरामले सहिद परिवार भेटेका र सद्भाव देखाएका पनि छन् । तर, यतिले पुग्दैन । किन बद्लिएनन् गाउँहरू त यतिका मानिस बलि चढ्दा पनि । आत्मबोध अझै गहिराइमा पुग्नैपर्छ ।
राजनीतिक ताता–पिरा कुराबाहेक लेखक हृदय चञ्चल छ । खोटाङमा रातभर साकेला नाच्न नपाएकोमा चुकचुकाउँछन् । दस वर्षअघि भेटेको कालीकोट रेडियोको एउटा ठिटोको सम्झना उभिन्छ मेरो मनमा । उसले भनेथ्यो, ‘हिजो बच्चैमा जनयुद्धमा हिँडियो । जनवादी गीतबाहेक केही सुन्न पाइएन । आज मन लागेको गीत सुन्छु । मेरा लागि उदितनारायणको ‘मलाई यो जिन्दगीले चोट दियो गनीगनी’ भन्ने गीत बजाइदिनू है ।’ मान्छेले मनको रङ कहाँ लुकाउन सक्छ र !
भ्रमण टोलीसँगै हिउँमा रमाउँछन् । फोटो खिच्छन् । लोकभाकाको बखानमा भुल्छन् । ‘बाटो हानिएर तल झयो,’ ‘रिसले टुप्पीबाट धूवाँ आयो’ भनेका छन् । यस्ता अभिव्यक्तिले नियात्रामा जीवन भरेका छन् ।
हिजोको दिनमा कांग्रेस–कम्निस्टवाला पानी बाराबारको राजनीति गाउँगाउँमा छिर्‍यो । दलीय राजनीतिको एक रमाइलो दृष्टान्त भेटिन्छ पुस्तकमा । गोरखाको घ्याम्पेसालमा लेखकको टोली पुग्छ । यो ठाउँ कांगेसको गढ मानिएको ठाउँ हुन्छ । सबका सब व्यापारी पसल बन्द गरेर पिकनिक खान जान्छन् । आफूलाई सुन्न तयार नभएको जमातप्रति उनी आक्रोशित भएका छैनन् । बरु रमाइलोसँग कांग्रेस कम्निस्ट मनोभाव बयान गरेका छन् । यसले अब गरिने राजनीतिको क्षितिज फराकिलो होला कि, आस गर्ने ठाउँ दिन्छ !
हतारहतारमा रेल छोप्न दौडिएको जस्तो यात्राबाट पनि लेखकले धेरै कुरा टिपेका छन् । जनतालाई सुन्नुपर्ने जति भने सुनेका छैनन् । राजनीतिक संकीर्णताको काँडेतार चुँडाउन चाहेको मनोभाव भने ठाउँठाउँमा बुझिन्छ । योजनाबद्ध ढंगले गरिएको यो प्रयास प्रशंसालायक छ । सामाजिक सञ्जालको लाइक र सेयरको भरमा वैकल्पिक राजनीति गर्न तम्सने जमाना छ । लेखकको टोली हिउँ र सिरेटोले सेकिँदै नागरिकको दैलोदैलोमा पुगेको छ । अहिलेका लागि यही सुरुआत नै काफी देखियो । बाँकी गहिराइको यात्रा र आफ्नै माटोबाट निक्लिएको राजनीतिक दर्शन भने अझै पर्खाइको विषय हो ।
प्रकाशित : चैत्र १, २०७६ १३:०१